Nivoitra tamin’ity fihaonana omaly ity fa mibaby trosa 101 miliara Ariary sy fatiantoka 39 miliara Ariary ny orinasa. Manoloana izany dia hampiasa ireo fitaovana azo hahetsika ny orinasa mba hahafahana mamokatra izay kely vita fa tsy voatery hiandry ny Rosiana.
Hatreto dia mbola ny Rosianina no mpiara-miombon'antoka amin'ny KRAOMA, na nanajanona ny asa fitrandrahana Kraoma aza ny Rosianina nanomboka ny volana jolay 2019. Nivoitra nandritra ity fihaonana teny Ampandrianomby omaly ity fa hojerena ny pitsopitsony araka ny lalàna ny amin'ny mbola hanohizana na hanajanonana ny fiaraha-miasa eo amin'ny roa tonta, mila jerena rahateo ny lafiny iraisam-pirenena ao anatin'ity fiaraha-miasa ity.
« Tsy misy olana tsy voavaha anaty fifampiresahana”, hoy ny minisitra Ravokatra Fidiniavo. Nankasitraka ny tompon'andraikitra nihaino ny fitarainan'ny mpiasa sy nanaiky nifampidinika hirosoana amin'ny fanarenana ny orinasa ny delegen'ny mpiasan'ny Kraomita malagasy avy any Brieville, Andrianirina Dina.
Arabia Saodita: Hamatsy vola 20 tapitrisa dolara hanamboarana ny tetezan’i Mangoky »